QC - ရှန်ဟိုင်း Bosun ပွန်းစား Co. , Ltd မှ
ကုမ္ပဏီ၏စမ်းသပ်မှုစင်တာ, စုံလင်သောအရည်အသွေးကိုစမ်းသပ်နည်းလမ်းများရှိပြီး Carbon-ဆာလ်ဖာ Analyzer ရှိပါတယ်, ကို arc ကိုမီးရှို့မီးဖို, ကို elemental Analyzer, ပစ္စုပ္ပန်မှာ metallographic Micro-ခိုင်မာသော tester နှင့်အခြားအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ, ဖွဲ့စည်းမှု, ခိုင်မာသောနှင့်ဝန်ဆောင်မှုဘဝစစ်ဆေးများ၏တူသောနိုင်ပါတယ် ထုတ်ကုန်များနှင့်ထုတ်ကုန်အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းများသို့မဟုတ်ဝယ်ယူမှု၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကြောင်းသေချာ။
ကာဗွန်-ဆာလ်ဖာ Analyzer ဒြပ်စင် Analyzer မီးဖိုကိုမီးရှို့ Arc Metallographic Micro-ခိုင်မာသော tester
သုတ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ-specific သတ္တုပေါက်ကွဲမှု-သန့်ရှင်းရေး abrasives- များအတွက်၏လျှောက်လွှာမတိုင်မီသံမဏိအလွှာ၏ 1. အဘိတ်? အပိုင်း 3: မြင့်ကာဗွန်သွန်း-သံမဏိရိုက်ချက်နှင့် grit (GB ကို / T က 18838.3-2008)
သတ္တုပေါက်ကွဲမှု-သန့်ရှင်းရေး abrasives- အဘို့အသုတ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ-specific ၏လျှောက်လွှာမတိုင်မီသံမဏိအလွှာ၏ 2. အဘိတ်? အပိုင်း 4: အနိမျ့-ကာဗွန်သွန်း-သံမဏိရိုက်ချက် (GB ကို / T က 18838.4-2008)
သတ္တုမဟုတ်သောပေါက်ကွဲမှု-သန့်ရှင်းရေး abrasives- (GB ကို / T က 17850-2002) အတွက်သုတ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ-specific ၏လျှောက်လွှာမတိုင်မီသံမဏိအလွှာ၏ 3. အဘိတ်
mircostructure4သတ္တု-စစ်ဆေးရေးနည်းလမ်း (GB ကို / T က 13298-91)
5. သတ္တုပစ္စည်းများ-Vickers ခိုင်မာသောစမ်းသပ်မှု (GB ကို 4340-1999)
သတ္တု blast- အဘို့အသုတ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ-စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများ၏လျှောက်လွှာမတိုင်မီသံမဏိအလွှာ၏ 6. အဘိတ် abrasives- (GB ကို / T က 19816-2005) သန့်ရှင်းရေး
သုတ်ဆေးနှင့်သတ္တုမဟုတ်သောပေါက်ကွဲမှု-သန့်ရှင်းရေး abrasives- (GB ကို / T က 17849-1999) အတွက်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်-စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများ၏လျှောက်လွှာမတိုင်မီသံမဏိအလွှာ၏ 7. အဘိတ်